» गाँजालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटायो! गाँजालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटायो! – हाम्रो खबर
गाँजालाई संयुक्त राष्ट्रसंघले खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटायो!
काठमाडौं, १९ मंसिर । संयुक्त राष्ट्रसंघले गाँजालाई खतरनाक लागुपदार्थको सूचीबाट हटाएको छ ।
जापान, इराक, ब्राजिल, चीन, रूस, पाकिस्तान लगायतले भने विपक्षमा मतदान गरेका थिए । मतदानमा युक्रेन भने अनुपस्थित रहेको थियो ।
गाँजालाई हानिकारक लागुऔषधको सूचीबाट हटाउँदै यसको औषधिजन्य गुण र वनस्पतिका रुपमा लिने विषयको वकालत भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ । ‘औषधीय उद्देश्यका लागि गाँजा उपयोग गर्ने लाखौै मानिसहरू यस खबरलाई स्वागत गर्छन् र यसले गाँजाबाट बन्ने औषधीय उत्पादनको बढ्दो बजारलाई प्रतिबिम्बित गर्छ,’ औषधि नीति पैरवी समूहहरूले एक विज्ञप्ति निकालेर बताए ।